Jereo ny fomba amam-panao any Ireland | Vaovao momba ny dia
Tsidiho i Irlanda tena zavatra niainana izany. Miresaka toerana iray izay hihaonantsika amin'ny olona mandray sy misokatra kokoa noho ny anglisy izahay. Ny Irlandey dia mirehareha amin'ny fomba amam-panaony sy ny fireneny, noho izany dia ho tian'izy ireo ny hilaza amintsika bebe kokoa momba izany rehetra izany, fa raha te hahafantatra bebe kokoa ianao alohan'ny hanaovana ny dia, dia mariho.
Androany dia ho hitantsika ny sasany amin'ireo Fomba amam-panao Irlandey hampanakaiky anay amin'ny fomba fiainanao izany. Ity tanàna ity dia mbola manana fahatsiarovana maro ny tontolon'ny Selta, zavatra hita amin'ny maro amin'ny fomban-drazany.
1 Fetin'ny Masindahy Patrick
3 Fanambadiana any Irlandy
4 Fanatanjahantena any Irlanda
5 Sakafo any Irlandy
6 Samhain sy Yule
7 Mozika sy dihy
La Fetin'i Saint Patrick dia avy any Irlandy, satria natao ho fanomezam-boninahitra ny mpiaro azy amin'ny 17 martsa. Maitso no feon'ny traikefa ary mizotra amin'ny arabe ny rehetra, ary mody miseho mody. Ny shamrock no tandindona tamin'io andro io, izay ampiasaina amin'ny fanajana ny fampianaran'i Saint Patrick. Noho ireo mpifindra monina nankany Etazonia dia manan-danja ihany koa ity andro ity eto amin'ity firenena ity. Androany dia manomboka ankalazaina amin'ny toerana maro hafa izy io. Mazava ho azy, tsy tokony hohadinointsika fa fankalazana iray izay teo am-piandohany dia nipoitra ara-pinoana, na firy na firy androany dia toa fisandratan'ny labiera irlandey amin'ny toerana maro izy io.
Ireo dia lehilahy leprechaun izay ao amin'ny tantaram-poko Irlandey ary toa mahazatra ny olona rehetra izy ireo. Voalaza fa manana volamena miafina be dia be izy ireo ary milaza ny angano fa raha mahita azy ireo ianao ary sendra mitantana azy ireo ianao miaraka amin'ny volamenany dia hitondra vintana betsaka ho anao izany. Ireo goblins ireo dia miseho amin'ny fomba malaza mitafy maintso, ny loko nentim-paharazana ao amin'ny firenena ary misy akanjo sy satroka.
Fanambadiana any Irlandy
Ny fampakaram-bady any Irlandy dia mifangaro fomban-drazana sasany. Ny sasany dia tanterahina araka ny fomban-drazana Kristiana, saingy mihamaro ny mpivady mampiditra ao amin'ny mariazin'izy ireo ny sasany amin'ireo fomban-drazana mahazatra izay entanin'ny fampakaram-bady Celtic sy mpanompo sampy taloha. Ny iray amin'ireo fomba amam-panao tsara indrindra dia ny mamatotra ny mifamatotra tanana ny ampakarina amin'ny tsipika, izay maneho ny firaisan'izy ireo. Etsy ankilany, misy brides maro izay manao satro-boninkazo eo an-dohany amin'ny fomba Celtic. Ny fomban-drazana izay niely teto amin'ny firenentsika aza ny fanaovana zava-baovao, zavatra nindramina, zavatra manga ary zavatra efa nampiasaina dia avy any Irlandy ihany koa.
Fanatanjahantena any Irlanda
I Irlandy koa dia mankafy fanatanjahan-tena fantatra iraisam-pirenena toy ny rugby. Na izany aza, eto amin'ity firenena ity dia manana fanatanjahan-tena manokana izy ireo, izay tsy dia fantatra loatra ivelan'ny sisintaniny, fa izay any Irlandy no tena malaza. Miresaka momba ny fanipazana sy ny baolina kitra Gaelic izahay. ny fanipazan-tena dia fanatanjahan-tena tena miavaka ary toa antitra tokoa izay misy ekipa roa misy mpilalao 15 miaraka amina tapa-kazo izay tsy maintsy mitondra baolina kely iray mankany amin'ny tanjona iray. Etsy ankilany, ny baolina kitra Gaelic dia afangaro amin'ny baolina kitra sy rugby, izay fomban-drazana ihany koa ary nilalaovan'ny mpilalao marobe. Ny fiandohany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ankehitriny misy ekipa avy amin'ny tanàna samy hafa mifaninana.
Sakafo any Irlandy
Toy ny amin'ny kolontsaina hafa, manana lovia manokana koa ny Irlandey. Raha handeha ho any Irlandy isika tsy maintsy manandrana ny Stew Irlandey, koba matsiro miaraka amin'ny legioma sy zanak'ondry. Ny chowder an-dranomasina dia lovia tena izy ary manankarena tokoa. Izy io dia misy lasopy fotsy matevina misy hazan-dranomasina vaovao. Tsy azonao atao ny tsy mahita ny lovia quintessential izay ho hitantsika any Angletera koa amin'ny fahafaham-po. Izahay dia miresaka momba ny trondro sy trondro angano, miaraka amin'ny chips sy trondro nendasina.
Samhain sy Yule
Mety tsy ho hitanao ny festival izay resahantsika amin'ireo anarana ireo, satria manonona fankalazana mpanompo sampy sy Celtika izahay. Ny mitovy no fantatsika rehetra dia ny Halloween na Andron'ny Maty any amin'ny toerana sasany sy ny Noely. Halloween, izay efa natomboka androany, dia ankalazaina any Irlandy amin'ny 31 Oktobra, fa ny 1 Novambra dia fetin'ny All Saints. ny Samhaín dia fankalazana nankalazana ny faran'ny fijinjana ary noheverina ho taona vaovao amin'ny kolontsaina Celtic. Ny etymology dia midika hoe 'faran'ny fahavaratra'. Androany dia ankalazaina manomboka amin'ny Halloween ka hatrany Samhain izy ireo, satria tany Irlandy dia tsy namoy ny fomban-drazany lehibe izy ireo.
Mozika sy dihy
Ny mozika irlandey dia ao anatin'ny kolontsain'izy ireo ihany koa. Fitaovana toy ny sodina, valiha na valizy izy ireo dia ao anatin'ity mozika nentim-paharazana ity izay mbola mitazona feo mampiavaka azy ankehitriny. Marihina ny dihy nentin-drazana Irlandy, izay tanterahina amin'ny fitsambikinana sarotra sy fihodinana anaty vondrona. Androany dia azo atao ny mahita seho manerana an'izao tontolo izao anaovana ireo dihy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Fomba amam-panao Irlandey